China Melting Point Analyzer ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Jiahang Instruments
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > အရည်ပျော်မှတ်မီတာ > ပလတ်စတစ်အမှုန်အရည်ပျော်မှတ်မီတာ > အရည်ပျော်မှတ်အမှတ်ခွဲစက်
JH-500A Melting Point Analyzer သည်နမူနာ၏အပူချိန်ကိုတိုက်ရိုက်တိုင်းတာပြီး၊ တိကျတည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောစမ်းသပ်မှုရလဒ်များပေးနိုင်ရန်တိကျသောအပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာကိုစုံလင်စွာပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဤတူရိယာသည်ကွန်ပျူတာမပါဘဲအရည်ပျော်မှတ်နှင့်အရည်ပျော်အကွာအဝေးအပူချိန်ကိုတိုက်ရိုက်တိုင်းတာနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်အရည်ပျော်မှတ်နှင့်အရည်ပျော်အကွာအဝေးအပူချိန်ကိုတိုင်းတာရန်ကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
ဟိJH-500A အရည်ပျော်မှတ်အမှတ်ခွဲစက် directly measures the temperature of the sample using the differential thermal method, and perfectly combines high-precision temperature control technology to provide users with accurate, stable and reliable test results. This instrument can directly measure the melting point and melting distance temperature without the computer, or it can be connected to the computer to measure the melting point and melting distance temperature.
1. အရည်ပျော်မှတ်အမှတ်ခွဲစက် Introduction
ဟိentire experiment can be completed without an external computer
မြင့်မားသောတိကျမှုနှင့်ပြန်လည်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုကိုသေချာစေရန် Dual အပူချိန်တိုင်းတာမှုများ
စမ်းသပ်မှု၏အဆုံးတွင် Buzzer သတိပေးချက်၊ အလိုအလျောက်ဒေတာချွေတာသည်
ခုနစ်လက်မအရွယ်ကြီးမားသော LCD LCD display၊ မြေပုံနှင့်မျဉ်းကွေးများသည်တစ်ချက်တည်းကြည်လင်ပြတ်သားသည်
ဟိsoftware is suitable for computers of various resolutions and can be upgraded online for free
2. အရည်ပျော်မှတ်အမှတ်ခွဲစက် Parameter
၀ï½ž ပေါင် ၂၀၀ မီဂါဝပ်
24bit colorï¼Œ7လက်မ touch screen
AC220V 50Hz/60Hz ဖြစ်သည်
အနည်းဆုံး hardware configuration
Celeron dual core ဖြစ်သည်
Resolution 1366*768 pixels နှင့်အထက်
Hard disk ၅၀၀ ဂရမ်
အနည်းဆုံး software configuration
Adobe PDF reader ပါ
ဟိအရည်ပျော်မှတ်အမှတ်ခွဲစက် has an important position in the research of the chemical industry and the pharmaceutical industry. It is an indispensable instrument for the production of polymer materials, medicines, spices, dyes and other organic crystal substances.
4. အရည်ပျော်မှတ်အမှတ်ခွဲစက် Accessories List
JH-500A အလိုအလျောက်အရည်ပျော်မှတ်တူရိယာအလုပ်လုပ် program program CD
အလူမီနီယံချောင်း (Î¦6.7 ×3မီလီမီတာ)
စံနမူနာများ (In, Sn, Zn)
JH-500A Automatic အရည်ပျော်မှတ်အမှတ်ခွဲစက် Operation Manual
ဖိအားလျှော့ချအဆို့ရှင် connector ကို
ဟိအရည်ပျော်မှတ်အမှတ်ခွဲစက် has its own heating system, which can ensureastable heating rate. The platinum temperature sensor has the advantages of fast response and high accuracy compared with the traditional method of using mercury thermometer.
မေး။ ။How many years have your company made အရည်ပျော်မှတ်အမှတ်ခွဲစက်?
hot Tags:: အရည်ပျော်အမှတ်ခွဲစက်၊ တရုတ်၊ စက်ရုံ၊ စျေးပေါ၊ အဆင့်မြင့်၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စျေး၊ CE